Ukuntywiliselwa kwindalo, iimbono zeentaba - I-Airbnb
Ukuntywiliselwa kwindalo, iimbono zeentaba
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJeff&Sylvia
Le ndlu ineempawu kwindawo yethu yasefama ehlaziyiweyo ibonelela ngazo zonke izinto zale mihla. Indlu yefama yamatye ibekwe kwindawo ezolileyo enemibono emangalisayo kudederhu lweentaba zaseSibillini, indawo egqibeleleyo yokuphonononga le ndawo yomlingo.
Fumana ulwamkelo lokuphumla nokwamkela ukuhlala kwindawo ehlaziyiweyo yelizwe lase-Italiyane nazo zonke izinto zale mihla. Ujikelezwe buhlaza, vuka kwisandi seentaka kunye nombono ophefumulayo kwi-Monte Vettore. Indawo yokuhlala inika amagumbi okulala amabini aneewodrophu, iitafile ezisecaleni kwebhedi, izibane kunye nezitulo, kwaye igumbi ngalinye lineen-suite ezibonelelwa ngamanzi ashushu elanga. Ikhitshi langoku lixhotyiswe kakuhle lilungele ukurhwaphiliza ubumnandi bokupheka; kukho netafile yokutyela ekhitshini. Ecaleni kwekhitshi yindawo yokuphumla enendawo yokutshisa iinkuni epholileyo kwiinyanga ezipholileyo, ilungele ukuphumla ekupheleni kosuku ukuphunga iglasi ebomvu yasekhaya ebalaseleyo ... okanye emhlophe! Kwigumbi lokuphumla kukho isofa eguqukayo ibe yisofa yokulala kabini yondwendwe olongezelelweyo.
Wamkelekile kwiCasa di Pietra! Le ndlu ikwindlwana encinci kwi-comune yaseMontefortino eneembono ezithandekayo phezu kweenduli ezijikelezileyo kunye neentaba zeSibillini. Kukho ii-agriturismi ezi-3 ezibonelela ngokutya kwase-Italiyane kwalapha kufutshane. Indawo yokuphumla kubathandi bendalo, amaxhama, iihagu zasendle kunye neencanda ziindwendwe rhoqo, iintaka ezidla inyama nazo zinokubonwa zijikeleza phezu komhlaba wethu. Jonga isibhakabhaka ebusuku, jonga iinkwenkwezi ezidubulayo kwaye wenze umnqweno!
Umbuki zindwendwe ngu- Jeff&Sylvia
Injongo yethu kukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kangangoko kwaye sabelane nawe ngolwazi lwethu ngale ndawo ithandekayo. Singakuvuyela ukukucebisa kwezona ndawo zokutyela zibalaseleyo zalapha ekhaya, iindawo ezinomdla kunye nezinto omawuzenze kunye nokukunika isikhokelo kwindlela entle yokuhamba intaba yasekhaya. Sihlala kwizakhiwo kwisakhiwo esahlukileyo kwaye ubumfihlo bakho, ngokuqinisekileyo, buyakuhlonitshwa ngalo lonke ixesha
Injongo yethu kukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kangangoko kwaye sabelane nawe ngolwazi lwethu ngale ndawo ithandekayo. Singakuvuyela ukukucebisa kwezona ndawo zokutyela zibalas…